Kedu ụdị ụdị nke igwe kwụ otu ebe kachasị mma? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Na-atụ aro igwe kwụ otu ebe ugwu - pragmatic solutions
Na-atụ aro igwe kwụ otu ebe ugwu - pragmatic solutions
Kedu ụdị ụdị nke igwe kwụ otu ebe kachasị mma?
Ha mechara gbanwee usoro ha wee chekwaa ihu, mana ọ bụeziIhe mmuta na ndi igwe biking na achota na mmekorita nke ndi mmadu.
ỌjọọIgwe kwụ otu ebeKedu.
Egwuregwu ugwu gbagoro ọtụtụ n'ime akụkọ ihe mere eme nke ihe dị ka afọ 40. Enwere ugbu a ụdị ọzụzụ dị iche iche dabara n'okpuru nche anwụ igwe kwụ otu ebe. Ya mere, anyị chere na ọ ga-abụ oge dị mma ịkọwa ụdị igwe kwụ otu ebe dị iche iche na ebumnuche ha maka ojiji.
Yabụ ka anyị bido na igwe kwụ otu ebe. Nke a bụ Canyon XC, obe na-agba ọsọ ịnyịnya ígwè. Nke a bụ ebe ibu dị ezigbo mkpa.
Yabụ na ọ bụ eriri carbon. Igwe ndị a na-abụkarị 29er n'ihi na ha nwere flap ahụ. Yabụ ozugbo ị banyere na mbelata, ha ga-agba ọsọ ọsọ nke ọma.
Dị ka m kwuru, ibu dị ezigbo mkpa, ya mere, ọ bụ maka ịdị ọkụ dịka o kwere mee n'ihi na ahụike na ọsọ dị ezigbo mkpa. Ha na-agagharị n'ike n'ike. Ha anaghị enye oke mgbapu mgbapu, mana nke ka mkpa bụ na ha bụ taya na-ada ngwa ngwa.
Igwe ndị ahụ nwere nkuku dị elu nke dị larịị, yabụ ha na-agbagharị na obere ọsọ ma dịkwa mma maka ịrị elu. Have nwere ogologo azuokokoosisi na ala handlebars na-ibu na n'ihu wheel otú ị na-adịghị eme ihe ukwuu wheelie mgbe ịrị. Nke a bụ ngwụcha nkwanye ugwu na-agagharị agagharị, ihe ndị mmadụ ga-agbago na ịgba ọsọ marathon, ikekwe ogologo oge karịa igwe kwụ otu ebe na-agafe agafe.
Nkwụsịtụ zuru ezu bụ ahụmịhe ịkwọ ụgbọala ka mma, ị ga-enweta ntakịrị njide na taya azụ. Trackszọ taya dị ntakịrị mma. N'ụzọ doro anya, uru ahụ dị ntakịrị karịa.
Ha na-enwekarị otu olu ma ọ bụ okpukpu abụọ, ma eleghị anya karịa abụọ karịa igwe kwụ otu ebe n'ihi na ị ga-agba ịnyịnya a ogologo oge. Ọzọ, echiche a ka bụ ọkụ, igwe kwụ otu ebe - yabụ bulie ihe m ga-akpọ igwe kwụ otu ebe. Ha na-enwe ihe ọ bụla site na njem 120 ruo nde 140 nke igwe kwụ otu ebe a.
Ha na-ejikarị igwe kwụ otu ebe wuo. Can nwere ike ịhụ na ọ dị ọtụtụ gburugburu eriri igwe ebe a, yana isi ihe dị mkpa, iji nweta ntaramahụhụ a. Ke adianade do, o nwere ogologo wiil ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere igwe na-agba ọsọ na-agba ọsọ na mba ma ọ bụ ya mere ọ na-adịwanye jụụ na ọsọ, nwere ike ịnya ala karịa nkasi obi, mana ebe a, ọ naghị arịgo nke ọma na post dropper, dịkwa ezigbo mma atụmatụ. - Ọ bụrụ na ị dịtụkwuo ọnụ ọgụgụ ọzọ, nke a bụ ndapụta mmiri nke nde 160.
Yabụ ị nwere igwe kwụ otu ebe dị mma nke na-arịkwa elu. Ọzọkwa, anyị chọrọ ka igwe kwụ otu ebe bụrụ ihe na - eme ihe ike, yabụ na anyị nwere taya buru ibu karị, nke na - egosi ihe mgbapụ ọzọ, mana ụgwọ ọrụ ya bụ na ha dị arọ - igwe kwụ otu ebe. Isi ihe dị n’azụ nke a bụ na ụlọ ọrụ ka na-eji ịnyịnya ígwè 26 agba ịnyịnya ígwè, teknụzụ ochie agazu ụzọ igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe, mana ụmụ okorobịa a ka na-agba 26.
Ọ dịghị mkpa maka nnukwu wiil. Echere m na ọ na-eme igwe kwụ otu ebe ka ọ dị mfe ịnwe ikuku n'ihi na o nwere obere wiil. Njem dị mkpirikpi, ikekwe naanị 100 nde, naanị iji wepu nkwụsị ndị ahụ ma ọlị mgbe ha siri ike.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ha nwere obere nguzo dị elu na obere etiti yabụ na ị nwere ike ịgagharị na igwe kwụ otu ebe iji mezuo usoro aghụghọ niile ha na-eme. Ezigbo oche dị ala iji nweta ya ma pụọ ​​n'ụzọ. - A igwe kwụ otu ebe igwe kwụ otu ebe.
Na mbu emezigharị wiil ndị a maka ịnyagharị n’elu aja dịka taa na snow. Nnukwu taya na-enye gị buoyancy ahụ. Hoops ndị a dị sentimita 4.8 n’obosara.
Jiri nke ahụ tụnyere taya igwe kwụ otu ebe, ikekwe 2.2, 2.4.
Ya mere, ha dị okpukpu abụọ. You adịghịdị mkpa ịnyịnya ígwè ịgba ọsọ ka ị bilie n'ụsọ osimiri taa. A na-ewu igwe kwụ otu ebe naanị na wiil ndị a.
Ha dị obosara nke na ihu ihu na azụ nke ndụdụ ahụ sara mbara nke ọma iji banye na nnukwu ụgbọ ahụ na nnukwu taya. Ọtụtụ mgbe, igwe kwụ otu ebe a bụ ihe siri ike ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe dị ka igwe kwụ otu ebe a ma ha na-ewu ewu. Can pụrụ ịhụ ndị a n’okporo ụzọ na ebe snow na ájá dị. - Downhill igwe kwụ otu ebe.
Kpamkpam oke mmachi maka ihe i nwere ike ime na nke a igwe kwụ otu ebe, nke e mere naanị maka roughest teren, n'elu na ala, ala a ugwu. Dịka ị pụrụ ịhụ, etubigara oke ókè, ruo na ndụdụ ihu, nke bụ mpempe akwụkwọ okpukpu atọ, dị ka ọgba tum tum, nnukwu taya, taya na-eme ihe ike, nke siri ike, mgbe na-enweghị tube. Narị narị abụọ njem, n'ihu na azụ, na-abụkarị ihe gbasara bọl.
A nnọọ ewepụghị n'iru n'akuku nke mere na ị na-enwe ahụ iru ala na nkpoda ugwu, n'ezie ogologo wheelbase nke mere na igwe kwụ otu ebe bụ ibu mụ na elu gbapụrụ ọsọ. Ogwe aka dị obosara, ruo ihe igwe 800, na-enyekwa aka inye igwe kwụ otu ebe ọzọ. Nwere ike ịchọta wiilị 26 dị ka nke a ebe a, ma ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya ndị nrụpụta na-eme ha na wiil 27.5 - nke siri ike.
Ha na-abịa n’ụdị na nha niile dị iche iche, 26-, 27.5- na 29 inch wiil. Ngwongwo ígwè, ogwe osisi carbon, o doro anya na enweghị nkwụsị azụ, ha na-enwekarị ndụdụ nkwusioru.
Ha na-abụkarị ugwu igwe ugwu dị ọnụ ala ma bụrụ ụzọ kachasị mfe iji bido n'egwuregwu ahụ. Ọtụtụ oge ndị mmadụ na-agba ịnyịnya hardtail dị ka igwe kwụ otu ebe ha. Ha ka bụ nnukwu ọ funụ.
Achọrọ m ịsị obi ike, mana a ka nwere ohere maka igwe kwụ otu ebe a - yabụ ka anyị ga. Nke ahụ bụ maka anyị 'nke igwe kwụ otu ebe maka ịdọ aka ná ntị'. Anyị nwetara echiche maka isiokwu a site na nkọwa na otu n'ime ngosi DirtShed anyị.
Ya mere echefula ịhapụ ihe ị kwuru n'okpuru. Anyị na-agụ ha niile - echere m na ịchọrọ ịhụ isiokwu ndị ọzọ ebe a na GMBN. Yabụ ọ bụrụ na ị pịa ebe a ị ga-ahụ edemede m na 'Nkwupụta Nkwupụta' - ma ọ bụrụ na ị pịa ebe ahụ ị nwere ike ịhụ 'Ndi Fatbikes Na-akpa ọchị?' - Ha Na-atọ ọchị? - Ha Na-atọ ọchị.
Nye anyị isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị. Isi mkpịsị aka dị ka.- Ma pịa anyị na hardtail ịdenye aha na GMBN.
Kedu igwe igwe ugwu kachasị mma maka ego ahụ?
Ugwu Ugwu kacha mmaN'okpuru $ 500
Ogbe TheUgwu29.Kacha mmaAhịaIgwe Ugwu.
Co-op Cycles DRT 1.0.Kacha mmaya na Hydraulic Disc brek.
Mongoose Switchback - Menmụ nwoke na Women'smụ nwanyị.Kacha mmaEzigbo HardtailMTB.
Ugboro abụọ 27.5Igwe Ugwu.
Mongoose Malus AbụbaIgwe kwụ otu ebe.
Ego ole ka m kwesịrị imefu ezigbo igwe kwụ otu ebe?
.B.ezigbo igwe kwụ otu ebega-efu gị n'etiti 1000 na 1500 USD. Aezigbo igwe kwụ otu ebedị oke ọnụ mana ị chọkwara gia ọzọ. Kwesịrị ekwesị mmezi ma na-elekọta gịigwe kwụ otu ebenwere ike belata ụgwọ.
Ego ole ka m kwesiri imefu igwe kwụ otu ebe?
Na nke kacha nta, anyị na-akwado ileba anya n'ihe ndị na-erughị $ 1,500 na nkwụsịtụ zuru ezu na $ 2,000 na $ 2,500. Nwere ike ịzụtaanyịnya igwemaka obere, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị gbanahụ aha aha ma ọ bụ dị njikere iburu akụkụ dị ala.Mar 18 2016
Ogologo igwe kwụ otu ebe zuru oke kwesịrị ya?
Chọrọ njem nke ọma karị: Azuru-nkwusioru ugwu igwega-agbanye ọtụtụ nrịgo egwu ndị a ga-ezigara gị n'ahụ (na ụfọdụ, na-egbochi gịigwe kwụ otu ebe). Nke a nwere ike inye aka belata ike ọgwụgwụ, nke nwere ike inye gị ohere ịgba ọsọ ọsọ ọsọ, ogologo oge, na nkasi obi ka ukwuu.Nwere ike 16, 2018
Nwere ike ịgba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe zuru oke n'okporo ụzọ?
Mgbeị nwere ike ịgba ịnyịnyaọ bụlaigwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ, enwere ụfọdụ mgbanwe ma ọ bụ akụrụngwaị nwere ikepụọ ka imenọkwasiihe obi ụtọ. Ihe mbụ doro anya bụ taya m na-ekwun'imeọzọ ngalaba.
O siri ike ịgbaga igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ?
Igwe igwe kwụ otu ebedịSiri nnukwu ikeka ị ga-eji ụkwụ na ụkwụ nwayọ nwayọ. Ma ha nwere cushynọkwasi, onye ziri ezina-agba ịnyịnyaỌnọdụ, ma nwee ike ịgafe n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ebe dị iche iche. Ngwakọ ma ọ bụ obeanyịnya igwena-fọrọ nke nta ka ngwa ngwa na mfe pedal dị ka aokporo ụzọ, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụsara ahụ ma nwee ọtụtụ ihe dị ka aigwe kwụ otu ebe.
Ọ kwesịrị m ịga igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ?
Igwe igwe kwụ otu ebeEwuru iji banye mmetụta sitere na nkume, mgbọrọgwụ na mbara ala. Ọtụtụugwu igwe kwụ otu ebetaa nwere nkwusioru nke dị ịtụnanya-okporo ụzọmana ekwesighi ma oburuna-agba ịnyịnyanaokporo ụzọ. Ọ bụrụ na ị nwere lockout, mgbanwe dị mfe bụ iji ya na gịokporo ụzọ.04.25.2018
Ọ dị mma ịgbago igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ?
Azịza ọsọ ọsọ ma dị mfe bụ: Ee, ị nwere ikenọkwasinke giigwe kwụ otu eben'okporo ámá.Igwe igwe kwụ otu ebena-isi mere makaigwe kwụ otu ebeụzọ ụkwụ, na agaghị arụ ihe fọrọ nke nta ka mma mgbe nọkwasịrị naokporo ụzọ, ma ị nwere ike ime ya.
ikuku mgbanaka imi
Ugba igwe ugwu ọ dị mma maka ịgba ịnyịnya n'okporo ámá?
Ugwuigwe kwụ otu ebe siri ike karịa pedal na nwayọ nwayọ na pavụ. Ma ha nwere cushynọkwasi, onye ziri ezina-agba ịnyịnyaỌnọdụ, ma nwee ike ịgafe n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ebe dị iche iche. Ngwakọ ngwakọ ma ọ bụ obe na-adịkarị ọsọ ọsọ ma dị mfe iji ụkwụ dị ka okporo ụzọigwe kwụ otu ebe, ebe ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụsara ahụ ma na-agbanwe agbanwedị ka igwe kwụ otu ebe.
Kedu ụdị ụdị igwe ugwu kachasị mma ịzụta?
Ugboro ole na ole igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo nhọrọ na ọnụahịa ego a. Ma, a hardtail na-aga ga-Mkpa ọkụ na budata mma specced. A ga-atụle ihe ndị na-eme ka abụba na-adọrọ adọrọ (ya na taya 2.6in +) ma nwalee ma ọ bụrụ na ị gachara igwe kwụ otu ebe.
Kedu ụzọ kachasị mma iji mụta ịnya igwe ugwu?
Iji malite, ị kwesịrị ị na-agụ nke a na-amalite ndu na igwe kwụ otu ebe iji nweta a mma echiche banyere egwuregwu. Ga-ahụ ụdị ozi niile gbasara ụdị igwe kwụ otu ebe na uwe ga-eme ka ahụ dịrị gị mma. Ajụjụ buru ibu banyere igwe kwụ otu ebe: Gịnị bụ ihe kachasị mma mbido igwe kwụ otu ebe?
Kedu ụdị taya m chọrọ maka igwe kwụ otu ebe?
Ihe Roscoe nke nwere taya 2.8 nke na - enweghị tube (sara mbara karịa ihe ị ga - ahụkarị na igwe kwụ otu ebe na ọnụahịa a) na - enyefe nchebe, gbakwunyere nke na - eme ka ndị mbido chee na ha nwere ike gwerie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ ọ bụla. Na okwute, rụrụ arụ, ha na-ejigide na-ahapụghị ịkpafu.